သန့်ရှင်းစေခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားသခင် ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတော်
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > သန့်ရှင်းခြင်း
သန့်ရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်သူအား ယေရှုခရစ်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း နှင့် သန့်ရှင်းခြင်းကို ဘုရားသခင်က သတ်မှတ်ပေးကာ ၎င်းတွင် ပါဝင်သည့် ကျေးဇူးတော်၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းခြင်းကို ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ကြုံရပြီး လူတို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မျက်မှောက်တော်မှ သက်ရောက်သည်။ (ရောမ 6,11; 1. ဂျိုဟန် 1,8စာ-၉; ရောမ 6,22; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,13; ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)၊
အောက်တိုဖို့ဒ်အဘိဓာန်အရသန့်ရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာ“ သန့်ရှင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုခွဲထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်” သို့မဟုတ်“ အပြစ်ကင်းစင်စေရန်သို့မဟုတ်အပြစ်ကင်းစင်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်။1 ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကသမ္မာကျမ်းစာသည်သန့်ရှင်းခြင်းဟူသောစကားလုံးကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်အသုံးပြုသည်ဟူသောအချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၁) ဘုရားသခင့်အသုံးပြုမှုအတွက်သီးခြားဖြစ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင့်လမ်းတော်နှင့်အညီဖြစ်သောအတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များ။2
ဘုရားသခင်သည်မိမိလူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ သန့်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၏။ ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ခွဲထုတ်လိုက်တာကိုပထမအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားစရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့၏အပြုအမူကိုသန့်ရှင်းစေသည့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာရှိသည်။
မေးခွန်းများတွင် - ခရစ်ယာန်များသည်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းတွင်မည်သည့်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သင့်သနည်း။ ခရစ်ယာန်များသည်မိမိတို့၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များကိုမြင့်မြတ်သောစံနှုန်းနှင့်အညီမည်မျှအထိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်မျှော်လင့်သင့်သနည်း။ အသင်းသားများသည်အသင်းသားများကိုမည်သို့တိုက်တွန်းရမည်နည်း။
ကန ဦး သန့်ရှင်းခြင်း
လူတို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်ပြီး မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ဘုရားသခင်ကို ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပါ။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဘုရားသခင်က အစပြုရမယ်။ လူတစ်ဦးသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ထံ မလှည့်မီတွင် ဘုရားသခင်၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤကျေးဇူးတော်သည် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်မဖြစ် ငြင်းခုံနိုင်သော်လည်း Orthodoxy သည် ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပေးသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကို လက်ခံပါသည်။ သူသည် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လူများကိုရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။ ရှေးအချိန်က၊ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့ကို သန့်ရှင်းစေခဲ့ပြီး ထိုလူများအတွင်း လေဝိသားတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူခဲ့သည် (ဥပမာ၊ 3. မောရှေ ၂၀:၂၆; ၂1,6; ၅ မွန်။ 7,6) သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သူတို့ကို ရွေးထုတ်ခဲ့တယ်။3
သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်များသည် ကွဲပြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်- "ယေရှုခရစ်၌ သန့်ရှင်းသော" (1. ကောရိန္သု 1,2) “ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်သောအားဖြင့် ငါတို့သည် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်” (ဟေဗြဲ 10,10).4 ခရစ်ယာန်များကို ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းစေသည် (ဟေဗြဲ 10,29; 12,12) ၎င်းတို့အား မြင့်မြတ်သည်ဟု ကြေငြာထားသည်။1. ဓာတ်ဆီ 2,5. ၉) ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက်လုံး “သူတော်စင်များ” ဟုခေါ်ကြသည်။ အဲဒါ သူတို့ရဲ့ အနေအထားပါ။ ဤကနဦး သန့်ရှင်းမှုသည် တရားမျှတမှုနှင့်တူသည် (1. ကောရိန္သု 6,11) “ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း၌ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ သင့်အား ရှေးဦးစွာ ရွေးချယ်တော်မူ၏။”2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,13).
သို့သော် သူ၏လူမျိုးအတွက် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရိုးရှင်းသောအခြေအနေသစ်တစ်ခု၏ ကြေငြာချက်ထက်ကျော်လွန်သွားသည် - ၎င်းသည် သူ၏အသုံးပြုမှုအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ထားပြီး၊ သူ၏အသုံးပြုမှုသည် သူ၏လူများတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ၀င်သည်။ လူတို့သည် “ယေရှုခရစ်ကို နာခံရန် ရွေးကောက်” (1. ဓာတ်ဆီ 1,2) သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၏ ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းခံရမည်။2. ကောရိန္သု 3,18) သူတို့သည် သန့်ရှင်းပြီး ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ကြေငြာရမည်သာမက၊ တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းလည်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဘဝသစ်တစ်ခု စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်၊ သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်စွာ ပြုမူနေထိုင်ရမည့်ဘဝဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဦးစွာ သန့်ရှင်းခြင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရား သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်၏။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတောင် ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့လူတွေကို သူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမှာ အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ၀င်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့် အခမ်းအနားအညစ်အကြေးများကို ရှောင်ရှားခဲ့ကြသည်။4,21) သူတို့၏မြင့်မြတ်သောအဆင့်အတန်းသည် သူတို့၏နာခံမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။8,9) ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အချို့သောအပြစ်များကို သန့်ရှင်းသောကြောင့် ခွင့်လွှတ်သင့်သည် (3. မောရှေ ၁1,6စာ-၇)။ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ အမူအကျင့်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားစဉ် (4. ကြွက် 6,5).
ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ သူတော်စင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်လာသောကြောင့်၊ ခရစ်ယာန်များကို “သင်တို့ကျင်လည်ရာအရပ်၌ သန့်ရှင်းစေရန်” တိုက်တွန်းထားသည်။1. ဓာတ်ဆီ 1,15စာ-၁၆)။ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသော သန့်ရှင်းသောလူများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံး ကရုဏာ၊ ကြင်နာမှု၊ နှိမ့်ချမှု၊ နူးညံ့မှုနှင့် စိတ်ရှည်မှုကို ပြသသင့်သည် (ကောလောသဲ၊ 3,12).
အပြစ်နှင့် ညစ်ညူးမှုသည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ (ဧဖက် 5,3; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,3) လူတို့သည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော အကြံအစည်များကို သန့်စင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် “သန့်ရှင်း” ကြသည်။2. တိမောသေ 2,21) ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မြင့်မြတ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ထိန်းချုပ်သင့်သည် (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,4) "သန့်ရှင်းသော" သည် "အပြစ်ကင်းသော" နှင့်မကြာခဏဆက်စပ်သည် (ဧဖက် 1,4; 5,27; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,10; 3,13; 5,23; တိတု 1,8) ခရစ်ယာန်များကို “သန့်ရှင်းရန်” ခေါ်သည် (1. ကောရိန္သု 1,2) "သန့်ရှင်းသောလမ်းကို ဆောင်ရန်" (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,7; 2. တိမောသေ 1,9; 2. ဓာတ်ဆီ 3,11) ကျွန်ုပ်တို့သည် “သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်” ရန် ညွှန်ကြားခံရသည် (ဟေဗြဲ ၁2,14) ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းစေရန် အားပေးခံရသည် (ရောမ ၁2,1) ကျွန်ုပ်တို့သည် “သန့်ရှင်း” ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသည် (ဟေဗြဲ 2,11; 10,14) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်သန့်ရှင်းနေရန် အားပေးခံရသည် (ဗျာဒိတ် ၂၊ ဒီဇင်ဘာ။2,11) ခရစ်တော်၏အမှုတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်းစေပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အတွင်းမှ ပြောင်းလဲပေးသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်၏ ဤအကျဉ်းချုပ်လေ့လာမှုသည် သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းတွင် အပြုအမူနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း ပြသသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်၍ သန့်ရှင်းသောအသက်တာကို ဦးဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လူများကို "သန့်ရှင်း" အဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ကောင်းသောအကျင့်နှင့် ကောင်းသောအသီးအပွင့်များကို ဆောင်ကြဉ်းရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည် (ဧဖက် 2,8စာ-၁၀; ဂလာတိ 5,22စာ-၂၃)။ ကောင်းသောအကျင့်သည် ကယ်တင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်၊ ယင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောအကျင့်များသည် လူတစ်ဦး၏ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများ (ယာကုပ် 2,18) ပေါလုက "ယုံကြည်ခြင်း၏နာခံခြင်း" အကြောင်းကိုပြောပြီး ယုံကြည်ခြင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် (ရောမ 1,5; ဂလာတိ 5,6).
လူတွေကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတဲ့အခါ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အကျင့်၊ ရှင်ပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့သားသူတော်စင်များနှင့်ညီအစ်ကိုများကိုခေါ်သော်လည်းသူတို့၏အသက်တာတွင်အပြစ်များစွာရှိသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှသတိပေးချက်များတွင်စာဖတ်သူများသည်အယူဝါဒဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်သာမကအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆုံးမစကားများကိုပါလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ကိုပြောင်းလဲစေသော်လည်း၊ သန့်ရှင်းသောအသက်တာသည်ယုံကြည်ခြင်းမှအလိုအလျောက်စီးဆင်းသွားသည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒများကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်ပင်အမှားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
“ငါ့အသက်” သည် အသေဖြစ်နိုင်သော်လည်း ခရစ်ယာန်များသည် ၎င်းကို စွန့်ပစ်ရမည် (ရောမ 6,6စာ-၇; ဧဖက် 4,22) ဇာတိပကတိ၏အကျင့်၊ ရှေးအတ္တအကြွင်းအကျန်တို့ကို သတ်ပစ်ရမည်။ (ရောမ၊ 8,13; ကောလောသဲမြို့ 3,5) ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကြောင့် သေဆုံးသွားသော်လည်း၊ အပြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိနေ၍ ၎င်းကိုအုပ်စိုးခွင့်မပြုသင့်ပါ။ (ရောမ 6,11စာ-၁၃)။ အတွေးများ၊ စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် မြင့်မြတ်သောပုံစံနှင့်အညီ သတိရှိရှိပုံဖော်ပေးရမည်။ သန့်ရှင်းခြင်းသည် လိုက်လျှောက်ရမည့်အရာဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၁2,14).
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြီးပြည့်စုံပြီး ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ရန် တောင်းဆိုခံရသည် (မဿဲ 5,48;
22,37) ဇာတိပကတိ ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် ရှေးအတ္တ အကြွင်းအကျန်များ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုမျှလောက် ပြီးပြည့်စုံခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ “စုံလင်ခြင်း” အကြောင်းကို ရဲဝံ့စွာပြောခဲ့သော Wesley ပင်လျှင် သူသည် မစုံလင်မှု လုံးဝမရှိခြင်းကို မဆိုလိုကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။5 ကြီးထွားမှုအမြဲဖြစ်နိုင်ပြီးမှာထား၏။ လူတစ်ယောက်မှာခရစ်ယာန်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်အမှားနည်းနည်းနဲ့ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာသင်ယူဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
တမန်တော်ပေါလုသည် သူ၏အပြုအမူသည် “သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,10) ဒါပေမယ့် သူကတော့ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ ယင်းအစား၊ သူသည် ထိုပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ပြီး သူတို့၏ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်သည်ဟု မယူဆကြရန် အခြားသူများကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,12စာ-၁၅)။ ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ခွင့်လွှတ်မှုလိုအပ်သည် (မဿဲ 6,12; 1. ဂျိုဟန် 1,8(၉) ကျေးဇူးတော်နှင့် အသိပညာ တိုးပွားရမည်။2. ဓာတ်ဆီ 3,18) သန့်ရှင်းခြင်းသည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တိုးပွားသင့်သည်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းခြင်းကို ဤဘဝတွင် ပြီးမြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ Grudem က ဤသို့ရှင်းပြသည်– “သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အပါအဝင် လူတစ်ကိုယ်လုံးပါဝင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသောအခါ (2. ကောရိန္သု 7,1; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 5,23) သို့ဖြစ်လျှင် သခင်ပြန်ကြွလာပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာအသစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့်တိုင်အောင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းမှာ အပြည့်အဝ ပြီးမြောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနားလည်ပါသည်။"6 သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီး ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ဘုန်းအသရေရှိသော ကိုယ်ခန္ဓာကို ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,21; 1. ဂျိုဟန် 3,2). Wegen dieser Hoffnung wachsen wir in der Heiligung, indem wir uns selbst reinigen (1. ဂျိုဟန် 3,3).
သစ္စာရှိသူများအားချစ်ခြင်းမေတ္တာမှရသောလက်တွေ့ကျနာခံမှုရှိရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရန်သင်းအုပ်ဆရာလိုအပ်ချက်ကို Wesely တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်များစွာပါရှိပြီး၎င်းကိုဟောပြောခြင်းသည်မှန်ကန်သည်။ ဒါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်နှင့်အဆုံး၌၌အပြုအမူကျောက်ချရပ်နားပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်
McQuilken သည်တစ်ယူသန်ဆန်သောချဉ်းကပ်မှုထက်လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ ၇ ယုံကြည်သူအားလုံးသည်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းတွင်တူညီသောအတွေ့အကြုံများရှိသည်ဟုသူကမတောင်းဆိုပါ။ သူသည်မြင့်မားသောစံနှုန်းများကိုထောက်ခံသည်။ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်း၏နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ်အမှုဆောင်ရန်သူ၏တိုက်တွန်းချက်သည်ကောင်းလှ၏။ သူသည်သူတော်စင်များ၏ဇွဲရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသာရေးဆိုင်ရာနိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းမည့်အစားမှားယွင်းသောအယူဖောက်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားထားသောသတိပေးချက်များကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ယုံကြည်ခြင်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်လက်တွေ့ကျသောအကျိုးဆက်များရှိစေသောကြောင့်၎င်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပေါ်အလေးပေးသည်။ ကြီးထွားမှုနည်းလမ်းများသည်ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းချက်၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Robertson သည်ခရစ်ယာန်များအားတောင်းဆိုမှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲကြီးထွားရန်နှင့်သက်သေခံရန်တိုက်တွန်းထားသည်။
ဘုရားသခင့်ကြေငြာပြီးနောက်၌ခရစ်ယာန်များဖြစ်ရန်ခရစ်ယာန်များကိုတိုက်တွန်းထားသည်။ အရေးကြီးသောညွှန်ပြအောက်ပါအတိုင်း။ ခရစ်ယာန်များသည်သန့်ရှင်းသောအသက်တာဖြင့်နေထိုင်သင့်သည်၊ အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းကြောင်းကြေငြာပြီးအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 RE Allen၊ ed. လက်ရှိအင်္ဂလိပ် Oxford Dictionary ၏ အကျဉ်းချုပ်၊ 8th Edition၊ (Oxford၊ 1990)၊ p. 1067။
2 ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (OT) တွင် ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသည်၊ နာမတော်သည် သန့်ရှင်းပြီး သူတော်စင် (စုစုပေါင်းအကြိမ် (၁၀၀) ကျော်) ရှိသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း (NT) တွင် “သန့်ရှင်းသော” ကို ခမည်းတော်ထံထက် (၁၄ ကြိမ်နှင့် သုံးကြိမ်) ထက် သခင်ယေရှုထံ ပို၍ မကြာခဏ ကျင့်သုံးသော်လည်း ဝိညာဉ်တော်၌ အကြိမ်ကိုးဆယ် ပိုများသည်။ OT သည် သန့်ရှင်းသောလူများ (အထွတ်အမြတ်ထားသူများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် လူများ) ကို ၃၆ ကြိမ်ခန့် ရည်ညွှန်းသည်၊ များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်း၊ NT သည် သန့်ရှင်းသောလူများကို အကြိမ် ၅၀ ခန့် ရည်ညွှန်းသည်။ OT သည် သန့်ရှင်းသောနေရာများကို အကြိမ် ၁၁၀ ခန့် ရည်ညွှန်းသည်။ NT က ၁၇ ကြိမ်ပဲရှိတယ်။ OT သည် အကြိမ် 100 ခန့် မြင့်မြတ်သောအရာများကို ရည်ညွှန်းသည်။ NT သည် သန့်ရှင်းသောလူများအတွက် ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် သုံးကြိမ်သာရှိသည်။ OT သည် အခန်းငယ် ၁၉ တွင် သန့်ရှင်းသောအချိန်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ NT က အချိန်ကို မြင့်မြတ်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မဖော်ပြဘူး။ နေရာ၊ အရာဝတ္ထု၊ အချိန်၊ သန့်ရှင်းမှုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အပြုအမူမဟုတ်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်အတန်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အလိုတော်နှစ်ခုလုံးတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းပြီး သန့်ရှင်းမှုသည် သူ့ထံမှလာသော်လည်း သန့်ရှင်းခြင်းအပေါ် လူတို့အပေါ်သက်ရောက်ပုံမှာ ကွဲပြားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် အရာဝတ္ထုများ၊ နေရာများနှင့် အချိန်များအတွက် သီးခြားအခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ လူများနှင့် ၎င်းတို့၏အပြုအမူများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
3 အထူးသဖြင့် OT တွင်၊ သန့်ရှင်းခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ အရာများ၊ နေရာများနှင့် အချိန်များကို သန့်ရှင်းစေပြီး၊ ယင်းတို့သည် ဣသရေလလူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်သော “သန့်ရှင်းခြင်း” ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 1. ကောရိန္သု 7,4 ရှာပါ - မယုံကြည်သူအား ဘုရားသခင်အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးအမျိုးအစားတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဟီး 9,13 ပဋိညာဉ်ဟောင်းအရ အခမ်းအနားအဆင့်အတန်းကို ရည်ညွှန်းရန် "သန့်ရှင်းသော" ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုသည်။
4 ဟေဗြဲကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင် "သန့်ရှင်းသော" ဟူသောစကားလုံးသည် ပေါလု၏ဝေါဟာရတွင် "တရားမျှတသည်" ဟူသောစကားလုံးနှင့် အကြမ်းဖျင်းညီမျှသည်ဟု Grudem မှတ်သားထားသည် (W. Grudem, Systematic Theology, Zondervan 1994, p. 748, note 3)။
5 John Wesley၊ Millard J. Erickson မှ ခရစ်ယာန်ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ ဖတ်ရှုမှုများ၊ အတွဲ ၃၊ ဘဝသစ် (Baker၊ 3)၊ 1979 တွင် John Wesley၊
6 Grudem, p ။ 749 ။
7 J. Robertson McQuilken, "The Keswick Perspective," Five Views of Sanctification (Zondervan, 1987), pp. 149-183။